CruiseTrends: mpitsangatsangana mpitsangatsangana amin'ny faran'ny 2021
Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » CruiseTrends: mpitsangatsangana mpitsangatsangana amin'ny faran'ny 2021
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Cruising • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny angon-drakitra indostrian'ny fitsangantsanganana dia mampiseho fa mijanona ho matoky ny mpanjifa hatrany ny fitsangantsanganana an-tsambo, ny famandrihana dia lavitra ho an'ny telovolana faha-4 an'ny 2021
Ny tatitra dia manome tsipiriany momba ny fironana amin'ny fitondran-tena ho an'ny mpanjifa amin'ny fitsangantsanganana sambo fitsangantsanganana ho an'ny 2021 febroary XNUMX
Manome vaovao momba ny fironana fitsangantsanganana malaza indrindra eo amin'ny mpanjifa ity tatitra ity
Ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo, andalana ary daty fitsangantsanganana be mpitady indrindra no nambara
Navoaka androany ny tatitra CruiseTrends ho an'ny volana Febroary 2021. Ity tatitra ity dia manome tsipiriany momba ny fironana amin'ny fitondran-tena ho an'ny mpanjifa amin'ny fitsangantsanganana sambo fitsangantsanganana ho an'ny 2021 febroary XNUMX.
Ny manam-pahaizana momba ny indostrian'ny mpitsangatsangana dia nanangona harena ara-data mba hanomezana fanazavana momba ny fironana fitsangantsanganana malaza indrindra eo amin'ny mpanjifa, ao anatin'izany ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo, andalana ary daty fitsangatsanganana ho an'ny premium, rendrarendra ary fitsangantsanganana amoron-drano.
Ny tatitra CruiseTrends ho an'ny volana febroary 2021 dia voalaza etsy ambany.
Andalana fitsangantsanganana malaza indrindra
(Miorina amin'ny totalin'ny fangatahana quote isaky ny tsipika fitsangantsanganana amin'ny volana iray)
2. Fialamboly: Oceania Cruises
3. Renirano: American Cruise Lines
Amin'ny laharana faharoa dia ny Princess Cruises ho an'ny premium / contemporary, Viking Ocean ho an'ny rendrarendra sy AmaWaterways ho an'ny ony.
Sambo fitsangantsanganana malaza indrindra
(Miorina amin'ny totalin'ny fangatahana quote isaky ny sambo)
1. Premium / Contemporary: Mahasarika ny ranomasina
2. Haitra: Mpanjakavavy Maria 2
3. Renirano: AmaSerena Manaraka amin'ny lazany dia Carnival Mardi Gras ho an'ny premium / ankehitriny, Oceania Riviera ho an'ny rendrarendra ary Amerika ho an'ny renirano.
Faritra fitsangantsanganana malaza indrindra
(Miorina amin'ny totalin'ny fangatahana quote isaky ny faritra)
1. Premium / Contemporary: Karaiba
2. Haitra: Eropa
3. Renirano: Eropa
Manaraka malaza izao dia i Amerika Avaratra ho an'ny premium / contemporary, Mediteraneana ho an'ny haitraitra ary Amerika Avaratra ho an'ny renirano.
Seranan-tsambo fitsangantsanganana malaza indrindra
(Miorina amin'ny totalin'ny fangatahana quote isaky ny seranana fiaingana)
1. Premium / Contemporary: Fort Lauderdale
2. Haitra: Miami
3. Renirano: Amsterdam
Manaraka laza izao dia i Miami ho an'ny premium / contemporary, New York ho an'ny rendrarendra ary New Orleans ho an'ny ony.
Seranan-tsambo fitsangantsanganana malaza indrindra notsidihina
(Miorina amin'ny totalin'ny fangatahana nalaina isaky ny seranana notsidihina nandritra ny dia fitsangantsanganana an-tsambo, tsy anisany seranan-tsambo fiaingana)
1. Premium / Contemporary: Cozumel
2. Haitra: Kusadasi
3. Renirano: Cologne Manaraka izay malaza indrindra dia i Nassau ho an'ny premium / contemporary; Istanbul ho an'ny rendrarendra ary Amsterdam ho an'ny renirano.
Firenena malaza indrindra notsidihina
(Miorina amin'ny totalin'ny fangatahana nalaina isaky ny firenena notsidihina nandritra ny dia fitsangantsanganana an-tsambo, tsy anisany firenena fiaingana)
1. Premium / Contemporary: Bahamas
2. Haitra: Gresy
3. Renirano: Alemana faharoa dia Etazonia ho an'ny tombony / ankehitriny sy ho an'ny rendrarendra, Netherlands ho an'ny renirano.
Karazan-kabine malaza indrindra
(Miorina amin'ny totalin'ny fangatahana nalaina isaky ny karazana kabine) 1. Premium / Contemporary: Balkon
2. Haitra: Balkon
3. Renirano: Balkon
Isan'ny kabinetra angatahina
(Miorina amin'ny isa malaza indrindra amin'ny cabins isaky ny fangatahana)
1. Premium / Contemporary: trano kely 1
2. Haitra: kabine 1
3. Renirano: kabine 1
Ny halavan'ny fitsangantsanganana malaza indrindra
(Miorina amin'ny halavan'ny làlan-kizorana indrindra)
1. Premium / Contemporary: 7 alina
2. Haitra: 7 alina
3. Renirano: 7 alina
Faharoa dia 14 alina ho an'ny premium / ankehitriny, 10 alina ho an'ny rendrarendra ary 8 alina ho an'ny renirano.
Volana fitsangantsanganana malaza indrindra no angatahina
(Miorina amin'ny volana be fangatahana indrindra)
1. Premium / Contemporary: Desambra 2021
2. Haitra: Novambra 2021
3. Renirano: Oktobra 2021
Fikandrana amin'ny fotoana famandrihana
Ny salanisan'ny andro eo anelanelan'ny daty nanoratana ny sambo fitsangatsanganana sy ny daty nandehanany.
1. Contemporary / Premium - namandrika 386 andro mialoha
2. Luxury - namandrika 349 andro mialoha
3. Renirano - namandrika 341 andro mialoha